Tababar haweenka lagu barayey maamul wanaagga oo Muqdisho lagu qabtay - Radio Ergo
Waxaa Muqidhso loogu qabtay 200 oo haween ah tababar ku saabsan hogaaminta fiican iyo soo muujinta doorka siyaasadda ee haweenka Soomaaliyeed, tababarkaan oo socday 9 maalmood, tababarkaan oo ay ka qayb qaateen gabdhaha jaamacaddaha dhameeyey, ururada bulshada iyo kuwa kale ee xarumaha dawladda ku jira.
Shugriya Diini oo ah gudoomiyaha xarunta cilmi barista haweenka Soomaaliyeed oo iyagu qabtay tababarkaan ayaa sheegtay inuu yahay tababarkii saddexaad oo lagu barayo haweenka sidii ay u noqon lahaayeen hogaamiye wanaagsan, baaritaano aan samaynay ayaan ku ogaanay in haweenka soomaaliyeed leeyihiin door aad u wanaagsan oo hogaaminta ah laakiin ay saamayn ku yeelatay takoorka dhaqameed ee looga fogaynayo taladda hogaanka wadanka iyo ka qayb qaadashadda hanaanka siyaasadeed ee 2016 oo la filayo inay wadanka ka dhacdo doorasho.
Haweenka oo dhibaatooyin kala duwan soo wajaha ayaa waxaa jira dhibaatooyin inta badan ku dhaca oo aysanna soo gudbin cid ka warqabtaana aysan jirin, tababarkaan ayaana sidoo kale haweenka lagu barayey siyaabaha looga hortegi kara tacadiyadda ka dhanka ah haweenka.
Sheekha Cali Siciid waa xubin ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa iyadu u sheegtay gabdhaha tababarka in rajadooda ka qayb qaadashadda haweenka doorashooyinka sanadka danbe ay wanaagsan tahay, in kastoo tiraddii dastuurku u qoondeeyey ee laamaha dawladda aysan haysan wakhtigaan, haddana ay wadaan tababaro ay kor ugu qaadayaan wacyiga haweenka sidii ay raadsan lahaayeen.
Saynab Maxamed Warsame waa gabadh 21 jir ah, waxayna hadda soo dhamaysay jamacadda Muqdisho oo ay ka baratay dhaqaalaha ayaa Ergo u sheegtay in haweenku bahan yihiin kulmadda noocaan ah oo ay ku ogaanayaan waxa xuquuq ay u leeyihiin si ay uga qayb galaan siyaasadda, iyadoo ay jiraan weli caqabadihii takoorka haweenka ee dhinaca siyaasadda aanu kala kulanna ragga.
Barakacayaal ka cabanaya noolal xumo